Maxay macnaheedu tahay saameynta Lohmann-Ruchti? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks Lohmann-Ruchti saamayn
Qeexitaanka saameynta Lohmann-Ruchti
Der Lohmann-Ruchti saamayn waa wax-u saamayn fidinta awoodda ah. hab Tani, tusaale ahaan, kordhinta ee mashiinada wax soo saarka gaar ah. Kuwan waxaa markaas soo iibsatay cusub ka lacag, oo waxaa laga heli by qiimo iyo maalgeliyo. Lohmann-Ruchti saamayn sidaas waa saamayn ah u dhaca. Waxaa la go'aamin karaa by formula ah, oo loo yaqaan factor fidinta awoodda. Farqiga u la saamayn Lohmann-Ruchti been in xaqiiqda ah in haddii caasimadda sii daayay, oo waxaa keena hoos u dhaca aan la isticmaalo, waxaa loo yaqaannaa sii daayo caasimada ah.
Ballaarinta kartida hawlgalka
Awoodda waa la sii kordhin karaa marka la sii daayo caasimadda oo laga yaabo in qiimo-dhimista la isticmaalo. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in shirkadaha ay ka mid yihiin qiimo dhaca qiimaha dhirta ee qiimaha iibka alaabta la soo saaray. Inta badan kiisaska, qiimo-dhaca waxaa magdhow la siiyaa markii hore shirkadu waxay u baahan tahay inay iibsato mid cusub sababtoo ah xirashada iyo jeexashada mashiinka. Sababtan awgeed, shirkadu waxay horay u soo saartey caasimadda dib u maalgalin.
Laga soo bilaabo tusaalahan, xaqiiqooyinka lagu macnayn karaa in faahfaahin dheeraad ah. Shirkadda A maal Teigrührgeräte badan oo qiimo of EUR 2 12.000 in. Shirkadda qoray dabi si 3 sano linearly kasta oo 4.000 EUR / sanadkii. By reinvesting celinta ka qortaa-down) x (qalabka 2) 2 EUR qiimo dhaca) = x maaligelin (4000 EUR sannaddii kowaad iyo labaad ((16.000 sano. Xisaabinta Tani waxay muujinaysaa in sannadkii labaad, fiicni laga iibsan karaa . mustaqbalka fog ooyinka ee lagu kordhin karaa in tirada saddex. halkan waa xasilinta halkii ka dib markii sannaddii afraad.
Ballaarinta kartida iyo caqabadaha jira
Saamaynta Lohmann-Ruchti wuxuu kicin karaa xaalado gaar ah oo gaar ah, maadaama tani ay saameyn ku leedahay. Haddii shirkadu ku dadaalayso in ay ballaariso awooddeeda hawlgalka, shuruudaha soo socda waa qasab.
1. Waa inay jiraan maalgelin dhamaystiran ee qalabka bilowga ah.
2. Mudada qiimaynta waa in ay u dhiganto isticmaalka.
3. Sheegashooyinka waa in la nadiifiyaa waana in loo helaa ujeedooyin dareere ah.
4. Qalabka beddelka ah ee qalabka iyo nidaamyada waa inay ahaadaan kuwo joogto ah.
5. Dib-u-maalgalinta dib-u-dhac ayaa dhici doonta dhammaadka sanadka.
6. Baahida suuqa waa in ay sii socotaa si sare, si ay makiinadaha cusub iyo nidaamyada cusub u isticmaali karaan si wanaagsan.
7. Maalgelinta badeecadaha ama hantida hadda jirta waa mid si haboon loogu dhaqmo.
8. Dulmiga saameynta xiisaha ma'aha.
Sidee waxtarka ballaadhinta kartida?
Haddii dhammaan shuruudaha la dhammaystiro, saameynta ballaarinta kartida waxaa lagu xisaabin karaa naqshad gaar ah. Caanobooradani waxay kuxirantahay nolosha faa'iidada leh sanadaha n waana: Saameyn ballaaran ee awoodda fidinta (KF) = 2 * n / (n + 1).
Halkan waa tusaali gaar ah oo sharxaya qaaciddada. Nolosha faa'iidada leh waa sanadaha 4. Haddii aad markaa gashid ereyga isticmaalka ee caanaha, natiijada soo socota waa la helayaa. KF = 2 4 * / (4 1 +) = 1,6. Taasi waa, muddada dheer ee xajmiga 1,6 waxaa la gaari karaa marka loo eego gobolka hore. Sidaa darteed waa la kordhin karaa nidaamka 2 ee nidaamyada 3 muddada fog.
Gebogabadii iyo soo koobintii saameynta Lohmann-Ruchti
Saamaynta Lohmann-Ruchti waxay ugu dambeyntii xaqiijin kartaa ballaarinta awooda shirkadda. Qaadashada iyo amortization waxaa loo isticmaalaa sidii dib u maalgelin iyo sidaas loo isticmaali karo. Si kastaba ha ahaatee, shuruudaha waa in la buuxiyaa si loo isticmaalo saameynta Lohmann-Ruchti. Haddii kale, ballaarinta kartida lama gaari karo. Si kastaba ha ahaatee, saameynta lohmanka Lohmann-Ruchti waa hab fiican oo loo iibsado loona maalgeliyo lacag.
Maqaalka horeeedeeyay amaahdo
Maqaalka xigtaLombard amaah